Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya / WOWOW Musqusha Qolka Musqusha ee Keliya Matte Black
wowowfaucet waxaa ka go'an inay siiso qoysaska tayo sare leh iyo tayo wax ku ool ah qoysaska, si adag u xakameeya tayada si loo hubiyo tayada, iyo haddii aad wax su'aalo ah qabtid inta lagu gudajiro, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha si aad uga jawaabto su'aalahaaga.
2320700B tilmaamaha rakibaadda
Madoobaadka matoorka matoorka madow 2320700B
Marabtaa inaad gasho tubada musqusha qafiifka ah ee quruxda badan ee musqusha ah si ay musqushaada si fiican ugu dhammaystiraan? Raadin dambe! WOWOW waxay ku siineysaa qiimaha ugu wanaagsan ee lacag marka aad raadineyso tubada matte musqusha madow si aad si buuxda ugu hesho musqusha qolkaaga. Markaad naqshadaynayso ama dib-u-qaabaynaysid musqushaada, waa inaad si xikmad leh u doorataa tubbada qolkaaga musqusha. Ugu horreyntii, inaad si habboon ugu habboon tahay musqusha qolkaaga hore. Xaqiiqdii waa inaad marwalba ku dartaa tubooyinka musqusha qaabeynta musqushaada bilowga ah. Tan labaadna, waa inaad ka fogaataa tubooyinka musqushaaga inay noqdaan xiritaanka miisaaniyadda musqushaada, maadaama naqshado badan oo musqulaha ah aan lagu darin tubooyinka.
Si kastaba ha noqotee, WOWOW waxay ku siineysaa suurtagalnimada inaad iibsato tubada qolka musqusha madow ee tayada sare leh, iyo taabasho qurux badan si aad u siiso musqushaada qaabka qurxoon ee aad raadineyso. Hadana, qiimo aad u sarreeya oo ah qayb yar oo tubbada musqulaha ee A-brand. Tayada tubooyinka musqusha ee WOWOW si kastaba ha noqotee way ka wanaagsan yihiin kuwa qaarkood A-buundooyinka ay bixiyaan. Taasi waa sababta WOWOW ay ugu kalsoon tahay inay caddeyso inaan ku bixinno qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta lagu bixiyo tubooyinka musqusha, iyo gaar ahaan qolka musqusha ee musqusha.
Qubeyska tubada dharka wanaagsan ee musqusha madow
Sida la sheegay, WOWOW wuxuu ku dadaalayaa inuu ku siiyo qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta. Qolkan buluuga ah ee musqulaha musqulaha ah ayaa ah sida ugu wanaagsan ee aad ku heli karto markaad raadineyso tubbada musqusha. Tiknoolajiyadda wax lagu farsameeyo ayaa loogu talagalay in lagu dadaalo dhammaystirka. Sidan ayay WOWOW kuu siineysaa mid ka fiican, wax ku ool ah, iyo wixii ka sarreeya dhammaan tubooyinka musqulaha-wax ku oolka ah. Qubooyinka wanaagsan ee musqulaha qulqulaya oo kor u qaadaya tayada noloshaada, si noloshaada uga dhig mid deggan.
Xirfadleydan wanaagsan waxay isla markiiba ogaan doontaa markaad gacanta ku haayso tubada qubayska. Qalabka tayada leh ee loo adeegsaday tubbadan musqusha matte madow waa tayo aad u sarreysa. Qalabka sida zinc alloy iyo naxaas adag waxay dammaanad qaadayaan cimri dheeri. Ka sokow, kartoor-ka-caddeeynta NSF-shahaado-la'aan ah waa badeecad muddo dheer sii dheer oo sidoo kale ah. Iyada oo kaashaneysa hal-abuurka leh waxaa lagaa hubinayaa socodka biyaha ka hortaga ee daadashada. Waxaadna ku keydisaa ilaa 50% biyo ah muuqaalkan dabiiciga u ah bulukeetiga musqusha madow. Qalab-sameeyahaan si fudud ayaa looga saari karaa iyadoo aan la isticmaalin qalab kasta, si loo nadiifiyo ama loo beddelo.
Qubayska musqusha ee makhaayadaha madow ah ee Centerset
Qubayska qolka fadhiga musqusha ee matte madow wuxuu u samaysan yahay 4 inji 3 inji 20-dalool. Qolka dharka lagu xiro ee musqusha matte madow wuxuu la socdaa qalab dhameystiran iyo qalab rakiba. WOWOW tusaale ahaan waxay kaloo ka fikirtay galoofiska wax ku oolka ah ee loo rakibo adigoon gacmahaaga dhaawac u geysan. Waxaad si sahlan ugu rakibi lahayd tubada dharka lagu xiro ee musqusha madow XNUMX daqiiqo gudahood adigoon u baahnayn tuubbiile qaali ah. Haddii aad ubaahantahay khadad saad ah oo dheeri ah, kuwan waxaa loo iibiyaa si gooni gooni ah si ay u dhammeeyaan rakibaadda tubbada musqusha oo dhan hal mar.
Qubayska suuliga madow ee musqusha wuxuu la imanayaa goolhayaha wiishka qaada. Ushaan dhibbanayaal ah oo aan dhib badnayn ayaa si fiican u daadin karta biyaha, iyadoo ka ilaalinaysa inaad gacmahaaga taabato. Biyuhu si dhib yar ayay u qulqulaan iyagoon dhawaaqin dhib ah. Iyada oo la adeegsanayo dhaqdhaqaaq fudud oo gacanta ah waxaad ku furi kartaa ama xiri kartaa mashiinka biyo-baxa. Ka sokow, mashiinka qulqulka wuxuu si fiican ugu dhexjiraa tubada qolka musqusha madow iyadoon lagu xadgudbeynin esthetics. Waxaad umuuqataa inaad aragtid gacan kuhalka oo si fiican oo raaxo leh loogu dhajiyey dhabarka suuliga musqusha madow.
Qubeyska dharka xayawaanka ee dharka lagu qurxiyo oo adag
Midabka matoorka madow ee xarrago leh ee qasabaddan musqusha ayaa bixisa ku darista casriga ah ee ku dhowaad musqusha kasta. Musqusha qasabada musqusha badiyaa waa la yaraystaa sababtoo ah cabirkooda. Si kastaba ha noqotee, waxay saameyn weyn ku leeyihiin qurxinta musqushaada. Muuqaalka madow ee gaarka ahi hubaal wuu iska fogeeyaa meelaha caadiga ah ee lagu cadaydo ee nikkel ama dusha sare ee chrome. Waxay ku siineysaa dareen casri ah, si kor loogu qaado qaabka qurxinta dharka qurxinta casriga ah. Faa'iidada kale ee dusha sare ee matoorka madow waa inay aad u fududahay nadiifinta iyo dayactirka. Marqaati kama noqon doontid wax far ah oo wasakh ah oo ku yaal qasabadda musqusha ee matte madow.
Adiga oo hal gacan ku helaya qasabadda musqusha ee matoorka madow, waxaad si sax ah ugu maamuli kartaa mugga biyaha iyo heerkulka hal gacan. Sidan uma baahnid inaad isticmaasho laba gacan oo kala duwan, waxaana laguu oggolaan doonaa inaad si sax ah gacanta ugu maamusho biyaha. Waxaad gacantaada kale ku haysan doontaa bilaash hawlaha kale, sida cadayashada ama wejigaaga oo aad raaciso. Sidaa awgeed, qasabadda musqusha ee matoorka madow waa mid aad u adag oo sidoo kale aan ku fadhiyin meel faa'iido leh musqushaada. Sidaa darteed qasabadda musqusha ee matte madow waa ku dar dhab ah musqusha kasta oo casri ah.
Qubeyska musqulaha madow ee dammaanadda leh
WOWOW waxaan ku kalsoonahay tayada aan bixinno. Waxaan ku qanacsanahay inaan bixinno qiimaha ugu fiican ee lacagta aad suuqa ka heli karto. Tayadayadu waa mid aan la tartamin shirkado badan oo A ah. Sidaa awgeed, noocyo badan oo A ah ayaa kaliya bixiya muddo 1 sano ah oo dammaanad qaad ah. Kama baqeyno inaan ku siino damaanad dhan 3-sano oo ka dhan ah daadashada, dhibcaha, jajabka, iyo cilladaha dhammeeya. Sidaad u aragto, waxaan qaadaneynaa masuuliyadeena. Sidan oo kale uma baahnid inaad ka walwasho saad biyo socda oo aan khatar lahayn. Waxaan u qaadaneynaa halista si buuxda, oo hadii tubadaada musqusha aysan ugu shaqeyn doonin sidii ay ahaan laheyd, waxaan si farxad leh ugu badaleynaa qasabada musqushaada mattega madow mid cusub. Waa inoo balan qaad
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, waxaan sidoo kale ku siinaynaa dammaanad 90-maalmood oo lacag celin ah. Haddii aadan ku qanacsanayn qasabaddaada musqusha ee matoorka madow, isla markiiba waxaan ku siin doonnaa lacag celin buuxda. Taasi waxay cadeyneysaa kalsoonida aan ku qabno wax soo saarkeena. Tiro sii kordheysa oo macaamiil caalami ah, oo isugu jira macaamiil iyo ganacsi, waxay ku kalsoon yihiin qasabadahayaga, sabab la'aanna ma aha. Waxaan ku siineynaa qiimaha ugu fiican ee lacagta, waxaana rajeyneynaa inaan sidoo kale ku qancino.
Faa'iidooyinka musqulaha buluug khafiifka ah ee mugdiga ah:
• Gabal qafiif ah oo jilicsan oo dhammeystiran
• Farsamo far ma leh
• Qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta
• Way fududahay inaad iskaa u rakibto 20 daqiiqo gudahood
SKU: 2320700B Categories: Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya, Qubeyska Musqusha Tags: tubooyinka musqulaha, daadinta kulanka, inch xarunta
Classic, Casri ah
Golaha Nolosha Bullaacad